Kun Habeen iyo Habeen – Filimside.net
Sheekada waxay noo mareysay markii aan odaygii caawiyay misna geedkii hoostiisa geeyay oo uu igu dhagay sidoo kalana uuna bilaabay I nuu I garaaco. Odayga sidaan moodayay ma ahan wuxuu noqday mid aad u xoogan […]
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN safarkii 5aad ee sindibaad iyo odaygii jaziirada qeybtii 43aad.
February 6, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Waxaan ka cudur daaranayaa hadii aad kala kulantaan sheekada error typing inaad ii cudur daartaan waayo boobsiis ayaan ku qoray waqtiga oo igu yaraa dartiis. Sheekada waxay noo mareysay markii aan kazoo sheekeynay siduu layaabka […]
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 42aad safarkii afaraad ee Sindibad iyo markii nolosha lagu duugay.
February 4, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Sheekada qeybtii hore waxay noo mareysay markii uu ninkii naagtiisa ka dhimatay uu ii sheegay in dadka jaziiradaan ku nool ay dhaqan iyo caado u leeyihiin in hadii ninka ama naagta uu midkood […]
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 41aad safarkii afaraad ee Sindibaad iyo markii nolosha lagu duugay.
February 2, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Sheekada waxay noo mareysay markii uu sindibaad dhahay markii aan u imid dadkii jaziirada xeebteeda joogay ayaa waxay I dhaheen anaga waxaan daganahay jaziiradaan mida ku dhagan ee soo bax hadaad rabtid inaad na […]
hadii aad dooneyso inaad akhrisato 40kii qeyb ee ugu horeeyay ee sheekada KUN HABEEN IYO HABEEN fadlan halkaan riix.
Hadii aadan aqrisanin Sheekada KUN HABEEN IYO HABEEN hordhaceeda fadlan RIIX HALKAAN Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 1-aad Fadlan RIIX HALKAAN Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 2-aad Fadlan RIIX HALKAAN Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 3-aad Fadlan RIIX HALKAAN Hadii […]
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 40aad. Safarkii afaraad ee Sindibaad iyo markii nolosha lagu duugay.
January 31, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Sheekada qeybtii hore waxay noo mareysay markii Sindibaad uu kasoo laabtay safarkiisii sadaxaad isla markaasna uu magaalada baqdaad kusoo laabtay. Sindibaad ayaa hadalkiisii ku bilaabay; Kadib waxaan go’aansaday sida caadada ii aheydba inaan safro […]
. Waxaan marka hore ka cudur daaranayaa hakadkii sheekada ku yimid mudo sadax maalmood ah maadaama aan arimo qoys ku mashquulsanaa. Sheekada qeybtii hore waxay inoo mareysay markii uu sheydaankii madoobaa iska tagay anagana […]
Ogeysiis muhiim ah oo ku saabsan sheekooyinka Kun Habeen iyo Xaaskeyga Jinni bey ka ahaatay.
Anigoo ah saaxiibkiin Cabdiraxmaan Anteeno isla markaasna ah qoraaga sheekooyinka Kun Habeen iyo Habeen iyo Xaaskeyga Jinni bey ka ahaatay ayaan waxaan idin ogeysiinayaa in jadwalkii sheekooyinka uu isbadal ku imaaday. Kadib ciriiri […]
Sindibaad oo waramaya kana sheekeynayo safarkiisii sadaxaad ayaa hadal ku bilaabay; Markii aan kazoo laabtay safarkeygii labaad anigoo waliba aad u faraxsan kuna faraxsan inaan dib ugu soo laabtay magaaladeydii aan jeclaa ee Baqdaad waliba […]
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 36aad safarkii badmaaxii Sindibaad iyo jaziiradii dheymanka aheyd.
January 22, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Sheekada waxay qeybtii hore noo mareysay markii aan ogaaday in masaska maalinkii aysan soo bixin oo ka cabsadaan haadka balse ay habeenkii soo baxaan. Xiliga waa gabal dhicii meel cidlo an oo dad […]